Messi & Suarez Oo Guul Daro Ka Badbaadiyay Barcelona %
Messi & Suarez Oo Guul Daro Ka Badbaadiyay Barcelona
Lionel Messi iyo Luis Suarez ayaa waxay ka badbaadiyeen kooxda kubada cagta Barcelona guul daro kasoo gaarta dhigooda Sevilla kulankii ay ku booqdeen garoonkooda, kaasoo ka tirsanaa horyaalka La Liga ee wadanka Spain.
Labadaan wiil ee reer South America ayaa waxay dhaliyeen labo gool oo ay udhaxeysay kaliya Hal daqiiqo, kuwaasoo natiijada ciyaarta oo dhinac usocotay dhan kale uriday, islamarkaana sameeyay waxyaabo layaab leh oo aan la filayn.
Sevilla ayaa waxay Barcelona ay uga hormartay labo gool, kuwaasoo ay ka kala heshay ciyaartoyda kala ah: Franco Vasquez oo dhaliyay daqiiqadii 36aad ee qeybta koowaad iyo Luis Muriel, kaasoo shabaqa gaaray daqiiqadii 50aad ee qeybta labaad.
Laakiin, Suarez ayaa goolka bareejada dhaliyay daqiiqadii 88aad, halka Messi oo kulanka bedal ku yimid daqiiqadii 58aad uu dhaliyay goolka bareejada daqiiqadii 89aad ee qeybta labaad, taasoo ciyaarta ka dhigtay garbo siman 2-2.
Natiijadaan ayaa waxay uga dhigan tahay Barcelona ay hada ay leedahhay 76 dhibcood, iyadoona fadhisa kaalinta koowaad, waxayna 11 dhibcood ay ka sareysaa Atletico Madrid oo kulan baaqi ah gacanta ku haysatay kaasoo beri dhici doona.
Kubad-haysashada Barcelona ayaa ah 70 boqolkiiba, halka Sevilla ay haysatay 30 boqolkiiba, taasoo ka dhigan in Bluagrana ay ahayd mid gacanta sare ee kulanka lahayd, marka laga hadlo muuqaal ciyaareedka, mana jirin wax Rooso ah oo la bixiyay.
MessiSevilla vs BarcelonaSuarez
Wax Walba Oo Ku Saabsan Kulanka Chelsea vs Tottenham